Home Wararka Kulankii labaad oo caawa dhex maray safiirada beesha caalamka (Xog)
Kulankii labaad oo caawa dhex maray safiirada beesha caalamka (Xog)
Kulan casho oo uu soo qaban qaabiyay safiirka Ingiriiska u fadhiya Muqdisho David Conrad aya caawa waxaa lagu qabtay hoyga safiirka uu ka degan yahay xerada Xalane.
Kulankaan oo ay ka soo qeyb galeen dhammaan safiirada beesha caalamka iyo madaxda hay’adaha ka howl gala Soomaaliya ayaa diiradda lagu saaray xaaladda cakiran iyo mooshinka laga keenay MW. Farmaajo.
Ka soo qeybgalayaasha aya si kulul uga dooday arrimaha amniga, doorashooyinka iyo mooshinka laga keenay MW. Farmaajo waxayna dhammaantood isla garteen in ay soo saaraan baaq wadajir ah iyadoo Madaxweynaha iyo Ra’isul Wasaaraha la farayo in ay sharciga u hoggaansamaan, farahana ay kala baxaan arrimaha baarlabaanka iyo guddoonkiisa.
Mid ka mid ah safiirada shirka fadhiyay ayaa ka dhawaajiyay in dowladihii hore ay ka keeni jireen mooshin lana bedeli jiray ugu yaraan laba jeer Ra’isul Wasaare, balse hadda waxaan aragnaa in hay’addii sharci dejinta loo weeciyay isqabqabsiga, taasoo buu yiri uu horey noogu sheegay MW Farmaajo in ay isla dhameysanayaan wakhtiga RW Kheyre, balse taa marnaba uma qaadan in Madaxweynaha uu banneysanaayo in uu sharciga ku tunto si uu ugu gun gaaro ballan qaadka ay wada galeen isaga iyo RW Kheyre.”
Kulankan oo ahaa mid aad u adag ayaa waxaa beesha caalamka ay muujiyeen welwelka ay ka qabaan in markale magaalada Muqdisho ay ka dhacdo dagaal sokeeye, balse waxay carab dhabeen dulqaadka ay muujiyeen mucaaradka iyagoo xusay dhacdadii lagu weeraray Senator Cabdi Qeybdiid iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Xaaladda amni ee Muqdisho ayaa aad u liidata waxaana magaalada laga dareemayaa cabsi badan oo ay qabaan shacabka. Ciidankii xasilinta ee lagu soo wareejiyay Booliiska ayaa bilaabay in si bareer ah u toogtaan qofkii ku soo hadal celiya, waxaana ay bilaabeen in ay shacabka ka qaataan telefonada iyo kombuutarada xillaga habeenkii.
Waxaa magaalada Muqdisho soo galay ciidan badan oo ka soo baxay furumaha dagaalka, waxaana laga dareemaya in dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka ah ay heegan u yihiin in ay is difaacaan haddii uu weerar kaga yimaado maamulka MW Farmaajo iyo RW Kheyre.
Previous articleDeqa Dhalac wins big in special election for South Portland council seat
Next articleBarakacayaashii loo soo bixiyay banaanbaxa oo kooxda Farmaajo lacagtii kala goosatay (Daawo Video)
Kenya oo ka baxaysa kiiska dacwadda Somaliya
Maxa ka soo baxay kunlankii MW Deni & Ku-xigeenka Ergayga Qaramada...